म’हिलाहरुको यी अं’ग छु’दा आफैं स’म्बन्धका लागि अ’पिल ग’र्छन [६ टिप्ससहित] - NaulooDhun
म’हिलाहरुको यी अं’ग छु’दा आफैं स’म्बन्धका लागि अ’पिल ग’र्छन [६ टिप्ससहित]
May 28, 2021 adminLeaveaComment on म’हिलाहरुको यी अं’ग छु’दा आफैं स’म्बन्धका लागि अ’पिल ग’र्छन [६ टिप्ससहित]
शा’रीरिक स’म्बन्ध प्राय मानिसको आधारभुत आवश्यकता भैसक्यो । मानव जिवनमा स’म्बन्ध राख्नु धेरै नै आवश्यक हुन्छ । शा’रीरिक स’म्बन्ध रा’ख्न पुरुषहरु खु’ल्ला रुपले प्र’स्तुत हुन्छन भने म’हिलाहरु ल’जाउने ग’र्दछ्न । म’हिलाहरु का य’स्ता अ’ङ्ग हरु छु’दा आफै स’म्बन्धको लागि अ’पिल ग’र्दछन : १ स्त’नको *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
.प्रेमको परिभाषा बद्लिदैछ । प्रेमको शैली बद्लिदैछ । वैशालु जोडीको प्रेम गर्ने तौरतरिका बद्लिदैछ । डिजिटल युगमा हुर्कदो फास्टफुड पुस्ता प्रेममा पनि भिन्न स्वाद र प्रयोग रुचाउन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा हिन्दी बिबिसी अनलाइनले एक लेख प्रकाशित गरेको छ, जसले युवापुस्तामा ‘मल्टिपल लभ’को ट्रेन्ड कसरी विकास हुँदैछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।त्यहाँ लेखिएको छ, ‘२४ बर्षकी गरिमा तीन युवासँग एकसाथ प्रेम गर्छिन् । अर्थात उनीसँग अहिले तीन जना ब्वा’इफ्रेन्ड छन् । रमाइलो त के भने, यी तीन
ब्वा’इफ्रेन्डले एकअर्कालाई चिन्छन् र यस सम्बन्धलाई उनीहरुले सहज मानेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ कि एक युवतीले एकसाथ तनि युवासँग प्रेम गर्न सक्छन्।गरिमाले यसको जवाफ ‘सक्छ’मा दिएकी छिन् ।’ भनिन्छ प्रेम र यु’द्धको कुनै सीमा हुँदैन । कुनै नियम हुँदैन । कुनै सूत्र हुँदैन । एक जना युवाले एक जना युवतीसँग मात्र प्रेम गर्छ वा प्रेममा एकल सम्ब’न्ध मात्र स्थापित हुन्छ भन्ने शैली अहिले फेरिएको प्रमाण हो यो । त्यसो त अहिलेका पुस्तावीच हुने प्रेममा भावनात्मक भन्दा बढी शा’रीरिक हुने गरेका छन् ।बाहिरी आकर्षणलाई नै प्रेम भनेर बुझिरहेका यी पुस्ता प्रेम पछि शा’रीरिक स’म्बन्धसम्म पुग्ने गर्छन् । त्यसपछि भने उनीहरुको प्रेम दिगो रहँदैन । यही
ढंगको प्रेम चक्करमा फन्को लगाइरहेका थुप्रै युवायुवती अनेकन समस्यामा पनि फसिरहेका छन् । अनिच्छित गर्भ रहने, अ’वैंधानिक ग’र्भपतन गराउने जस्ता कुरामा उनीहरु फस्ने गरेका छन् ।पछिल्लो समय युवापुस्ताको चिन्ता, डिप्रेसन र आ’त्मह’त्याको पछाडि पनि उनीहरुको कच्चा प्रेम स’म्बन्ध नै कारण बन्ने गरेको देखिन्छ ।हुन त के भनिन्छ भने, प्रेम गरिदैन । यो आफै हुन्छ ।
अर्थात स्वतस्फूर्त रुपमा प्रकट हुने भावनात्मक संवेग हो प्रेम । त्यसैले प्रेम चाहेर गरिने वा चाहेर छुटाइने कुरा पनि भएन ।तर, वैशालु जोडीबीच हुने प्रेम भावनाबाट प्रकट भएर होइन, शा’रीरिक
आ’कर्षणबाट हुनेगर्छ । यस किसिमको प्रेम-सम्बन्ध बढाउनुको पछाडि उनीहरुमा अनेक स्वार्थ र उदेश्य हुनेगर्छ । कतिपयले देखासेखीमा यस्ता सम्बन्ध बनाउँछन् । कतिपयले शा’रीरिक आवश्यक्ता परिपूर्तिका लागि स’म्बन्ध बनाउँछन् ।
यसरी प्रेम स’म्बन्ध बनाउने क्रममा उनीहरु एउटै साथीमा मात्र सीमित नहुन सक्छन् ।एकसाथ दुई वा तीन जनासँग पनि प्रेम स’म्बन्ध बनाउन सक्छन् ।
बिबिसीमा लेखिएको छ, ‘खासगरी यस किसिमको स’म्बन्धलाई उनले ‘पोलिएमरस रिलेशनशिप’ भनेकी छिन् । यस किसिमको स’म्बन्धको चलनलाई पोलिएमरी नामले जानिने रहेछ
म तिन बोयफ्रेन्ड राख्न चाहन्छु सम्भव होला ?
जेल सजाय भोगिरहेका १४ नेपालीलाई कतारी अमिरले दिए आममाफी !
कलेज पढ्ने युवती निस्कियो कल ग्रल जब बाटोमा नै यस्तो गरेसी हेन्रुहोस भिडियो